Hashflare ahụmahụ - Blockchain News
Anyị na-anwale na-eweta Hashflare maka ị. Anyị na-eso nke a nyochaa nke anyị Hashflare ahụmahụ. Anyị na-etinye ego anyị ego na nwoke na enye na-egosi gị na-arụpụta transparently. The na-eweta Hashflare anyị ugbu a na-mara dị ka onye nke kasị mma Ngwuputa na enye na usoro nke uru maka ego.
Anyị ugbu a na-nwere 1000.39 Þ / s sha-256 Bitcoin Mining
N'ihi na dị nnọọ mma na-arụpụta na na soplaya Hashflare, anyị na-etinye na a ọtụtụ site ịzụ ọzọ. na ngụkọta, anyị nyekwara banyere $ 150,000 na Ngwuputa na Hashflare. Na ndị na-esonụ nkọwa ị pụrụ ịhụ anyị ugbu a na-gbaa akwụkwọ ọrụ:
Na ndị na-esonụ graphic anyị na-egosi na ị na nke ugbu a na Ngwuputa pụta kwa nke / s:
Ka i si hụ, anyị ugbu a na-enweta ihe ruru. 0.00014428 BTC (Bitcoin) kwa gbaa akwụkwọ nke / s tupu deducting mmezi-akwụ ụgwọ. Nke ahụ bụ banyere 0.14 BTC (bitcoin) a ụbọchị na dị n'okpuru 1000 Þ / s. Ebe i nwere ike ịhụ n'ihi na mmezi-akwụ ụgwọ:
Ebe a ọzọ na nọmba, si 0,14011852 Bitcoin na-deducted anyị maka mmezi 0,02317,904. N'ihi bụ otú: 0.11693948 BTC kwa ụbọchị. Ka emechara, 1288.87 USD a ụbọchị na ugbu a ọnụego mgbanwe – 11021.70 USD (26.01.2018)
Hashflare ahụmahụ na nkwado
Anyị nwere nnọọ mma hashflare ahụmahụ na nkwado otú anya. Mmeghachi omume n'oge ụbọchị abụọ a ga-ndokwa site ị. Ọwọrọ, Otú ọ dị, anyị na-ahụ openness nke na-eweta na usoro nke dị iche iche nkwado ọwa na a mma-nọgidere na-enwe Facebook page dị ka a nnukwu gbakwunyere.
Ukwuu karịsịa bụ openness banyere ndị mmadụ n'azụ ụlọ ọrụ. O siri ike na a ígwé ojii na-eweta amụọ otú n'ihu ọha na ya. Ọ bụ mgbe niile mma mara onye ị na-agwa okwu na nsọtụ ọzọ.
Hashflare ahụmahụ na backoffice ma ọ bụ na website
The website bụ ngwa ngwa na azụ ụlọ ọrụ bụ ukwuu ọkachamara. Rute ugbu a, e nweghị ígwé ojii na-eweta ebe ị pụrụ ime ka ọtụtụ ntọala. Ọ bụrụ na mmezi ọrụ a rụrụ na website, na-eweta ga-enye ihe ọmụma banyere website na on Facebook, nlereanya.
Ahụmahụ na-arụpụta nke Ngwuputa
N'ezie, Hashflare ukwuu tụrụ aro ka nke ugbu a na-eto eto anyị Cloud Mining. Anyị bụ nnọọ afọ ojuju na-arụpụta. Na nke a nyochaa ma na tụnyere ị pụrụ ịhụ anyị na-arụpụta. Ọ bụrụ na i nwere ezi ihe ma ọ bụ ihe ọjọọ ndị mere na a na-eweta, na-eche free ịkpọtụrụ anyị.
Mbụ aka ahụmahụ akụkọ
Na ule akụkọ, anyị na-adabere naanị na anyị onwe anyị hashflare ahụmahụ. Ị ga-ahụ a na nnata ọ bụla nke anyị na okwu na ụdị screenshots na anyị website. Anyị nyekwara ezigbo ego na nwoke akaụntụ na naanị akọ ezigbo ihe. A uzo ule usoro dị ezigbo mkpa ka anyị. Naanị otu soplaya na anyị na-anwale na-anwale onwe anyị na-dị na inyocha site anyị.
Ahụmahụ na payout na hashflare
N'ezie, N'ikpeazụ, nke nke payouts bụ ihe kasị mkpa. naanị a na-eweta nke ezigbo ihe si nọmba na azụ ụlọ ọrụ site na a ọma na reputable na-eweta. Anyị nwere ike gosi na nke a bụ eziokwu na Hashflare na ndabere nke anyị onwe anyị ahụmahụ. n'ime 5 nkeji anyị Bitcoin nọ anyị wallet. Ọzọkwa na nke a, anyị nwere ike na-akwado ndị na ígwé ojii na Ngwuputa na-eweta.
Anyị Hashflare Review
N'ezie, na mgbakwunye na anyị nwere ahụmahụ, anyị na-mụụrụ a zuru ezu review site search engine. N'ezie, anyị chọọ Internet maka ojoro, wayo, ma ọ bụ okwu dị ka rip-apụ. Karịsịa na-asụ Bekee ụwa, ebe ígwé ojii Ngwuputa bụ ugbua mma mara, e nwere ihe na ahụmahụ.
The N'ihi nke anyị hashflare review
Na German na mba na search nakwa dị ka YouTube, anyị ahụghị ọ bụla na-adịghị mma ahụmahụ Hashflare. On niile nyiwe, na-eweta na-toro dị ka oké njọ na uru. O yiri ka Hashflare emebeghị ka oke ibu emehie na ya ahịa. N'ezie, anyị nwere abụghị naanị dabeere n'ebe ndị a testimonials kamakwa ọma mụụrụ a ule na anyị onwe anyị ego.
Dị ka a zụrụ azụ IT ọkachamara maka ngwa mmepe, ọ na a-enye ha ndụmọdụ na-eduga software ụlọ ọrụ n'ihi na ihe karịrị 10 afọ. Cryptocurrency na-aghọ esiwanye dị mkpa ka ulo oru na investors. Alexander achọọ inye mmadụ niile mfe nnweta mkpa.
Na anya cryptocurren ...
Crypto Market Sees Solid Green! Ethereum, Ego, Ripple, Tron!